Esikrinini - nomdlali sina okukhulu. "Kusho uCaptain Phillips" - UPaul Greengrass Thriller
Ngemva kokubuka esekelwe kweqiniso indaba Thriller "kusho uCaptain Phillips" (nabalingisi ngomklamo wokuqala: T. Hanks, B. Abdi Abdirahman B.) kubonakala sengathi umqondisi Pol Gringrass reinvented isenzo-akhicite ebhayisikobho.
Iqiniso lokuthi isihloko isithombe "kusho uCaptain Phillips» (uCaptain Phillips 2013) uyogcwala high action game, ungakwazi ukuqonda, ngibona igama umqondisi sika. Iqiniso lokuthi umqondisi, Oscar winner Pol Gringrass is for ababukeli eyaziwa yamaphrojekthi yakhe yangaphambilini yimpumelelo lapho isenzo kwaba ngaphezu kokwanele, "Ultimatum" nesithi "Bourne Eliphakeme," "ngeSonto Bloody," "The Lost Flight", "Green Zone ". Ngakho-ke akumangalisi ukuthi ungomunye izinto eziphawuleka kakhulu phakathi abakhiqizi Scott Rudin ukuphathiswa lithathelwe izindaba, okusekelwe izenzakalo zangempela eziye zenzeka, futhi utshela indaba yalokhu kuhlasela ekhohlisayo izigcwelegcwele zasolwandle kusukela esigodini waseSomalia kwi "Alabama". By endleleni, base wacosha kanye abadlali. "Kusho uCaptain Phillips" wadutshulwa izinyanga ezimbili kuphela. Cishe yonke inqubo ukuqopha okwenzeka olwandle. Pol Gringrass ngokuyisisekelo yakhetha eseyi kanye ekhethekile visual effects. US Navy ukuhlinzeka ukwesekwa okugcwele abadali ifilimu, ngakho asemanzini kanye abachithi babengokoqobo. Ukuze isixuku ingabe akukuningi yini okuhilelekile abadlali. "Kusho uCaptain Phillips" kwaba DEBUT ifilimu ngoba inombolo enkulu US Navy izisebenzi.
Pol Gringrass unikezele ifilimu zomphakathi onaMandla, uhlobo "isinyathelo somphakathi nge ukuchema kuzo zefilosofi" - ngakho manje isebangeni media yabo izingxoxo, nabalingisi emsebenzini project. "Kusho uCaptain Phillips" ibamba ukunaka ngokulinganayo futhi yikuphi umbukeli ongaqeqeshiwe, futhi izwe ifilimu baxgeki, amalungu American Academy. Ngakho-ke, ukuqokwa kwakhe amaningana asho "Oscar" we Saga ukuvukela imfihlo sasingagwemeki. Futhi ukuphakamisa ifilimu "Oscar" wayengeyena nje ngokuya umsindo, ukuhlela, nokwenza, kodwa umsebenzi ikhamera. Opharetha ifilimu kwaba ukudubula cishe wonke amaphrojekthi Greengrass futhi Ketrin Bigelou, ihlupha Ken Loach waseBrithani ongazazi izindlela Barry Ackroyd. Professional lebhizinisi owawuqondene izilaleli umhlahlandlela ephelele ngokusebenzisa ngamaphasiji umkhumbi omkhulu, ephethwe knock phansi yonke udidekile ngifuna, uhambisane ngokwesaba, ngifuna ziphephile yabo umphefumulo. Ngokulalela iseluleko yakhe ngokungagcini nje umqondisi, kodwa futhi abadlali. "Kusho uCaptain Phillips" kwakungeke kube njengoba umxhwele ngaphandle kokuzibandakanya Bigelow.
I kinotrillera icebo "kusho uCaptain Phillips," nabalingisi izindima lapho ifaniswe nomunye ngokuphelele, wethula umbukeli umlingiswa oyinhloko - elitheni itilosi American Richard Phillips (adlalwa Tom Hanks). Yena - induna emkhunjini wezimpahla omkhulu bephethe amathani ayikhulu wezimpahla commercial futhi zezenhlalakahle amabili. Lo mkhumbi ihamba ngasogwini yezwekazi lase-Afrika. Ukudlulisa nasogwini Somalia, isikepe ehlaselwa ahlomile pirates namazinyo ukuhamba ngezikebhe ezimbili. BaseMelika Abesizwe kungukuthi amisiwe ukuhlela kwegazi, kodwa nje kwamahora ambalwa, bayoba ukulwa nomunye kokufa nokuphila. Ekuqaleni, amatilosi ne pirates, emva - induna ezine baseSomalia, ekupheleni Pirates ezine elibekwa armada lonke US Navy. Lo mlando nezinezinhlekelele kakhulu ukucutshungulwa iqembu okudala abalobi (B. Ray, Richard Phillips noStephen Telti) ezibikwa Thriller "kusho uCaptain Phillips" abadlali.
Emsipheni main kuphrojekthi Greengrass kwaba Duel ngokwengqondo izinduna ezimbili: American Phillips (Hanks) kanye waseSomalia Musa (Abdi). Ngokusho isikhundla iqondiswe, kokubili uhlamvu ngokulinganayo izisulu izimo. Abadlali of the ifilimu "kusho uCaptain Phillips," inkanyezi, babe nakho ezahlukene: Tom Hanks - nomdlali professional odumo ngamazwe, futhi Barkhad Abdi - debutant, abathuthela United States eSomalia.
Tom Hanks ayisekho ifana ecwebezelayo futhi bubuhle ibhayisikobho star yimikhuba - pogruznevshy, asebekhulile. Nokho, abantu bayazithanda degree of ukucwiliswa ngokwengqondo udlala indima induna ngamaloli wezimpahla, athumba isiphelile, elusizi, pirates oyingozi ngokukhethekile.
Ukuqala ifilimu career kwizimboni 80s ne iqhaza amahlaya nomndeni, ukuqashelwa kweqiniso futhi "Oscar" umlingisi wathola imiklomelo emibili kakade 90 ukuze kwenziwe izindima eziyinhloko e "Philadelphia" futhi "Forrest Gump." Lokho okuthola imifanekiso emibili ngokulandelana, sesiye iqhawe lesizwe yangempela. I Greengrass Thriller, ngokuvumelana eziningi a baxgeki ovelele, umlingisi idale engcono ngendlela ephawulekayo kusukela ezinsukwini "uthi elinamandla". igama umlingisi wahlanganiswa zonke ngothi lwabo, uhlu elandelayo abafakizicelo "Oscar", kodwa ngenxa Tom Hanks awuzange kufakwe lokugcina uhlu olufushane.
I abafuna umsebenzi 'Oscar' kuhlanganise nomdlali wamabhayisikobho waseMelika Lokudabuka waseSomalia Barkhad Abdi, oye wabonisa ifomu enviable okukhulu, kahle ezolile futhi ukudlala enobudlova pirates umholi yithemba muse abduwali. Ngenxa umenzi, owesilisa engcono asekelayo umlingisi, wayengabhekiseli kuphela ophakamiselwe "Oscar", kodwa wabuye wathola lokuphakamisa ngokuba BAFTA Umklomelo kanye "Golden Globe".
Okwamanje Barkhad Abdi imatasa ukuqopha-copyright wakhe movie Ciyaalka Xaafada, ngaphambili iqondiswe amavidiyo ambalwa umculo, uzama indima clipmaker.
Naphezu isihloko umdwebo bese kumagugu esizwe e ubuso nomdlali enkulu indima isihloko, umqondisi zigcinwe isilingo ukukhuluma kuphela mayelana Hanks. "Kusho uCaptain Phillips" - lokhu akukona iqhawe movie. Umqondisi nje yimpumelelo udonsa ukufana eziphucuzekile futhi bahlukunyezwa ngenxa yezimo abantu.
"Little Engine Adventures": emuva esikhathini esidlule?
Boris Bityukov - Biography nama-movie
Konchalovskiy Andron: Biography, ukuphila siqu, abantwana, futhi amaqiniso athakazelisayo
Biography Marii Poroshinoy: ithelevishini, cinema, yaseshashalazini
I amafilimu ezithakazelisayo kakhulu mayelana ezintabeni: ukubuyekeza, ukubuyekezwa nezilinganiso
Puppeteer utshwala: impendulo mayelana nokusetshenziswa, Izimo
Ihhovisi plankton: umqondo, ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Isitifiketi SRO. Kuyini futhi kanjani it?
Uyini ichashazi Mayer. Isisetshenziswa Mayer ichashazi
Ukubuyekezwa kwe "Renault Sandero Stepvey 2": ezibekiweko lobuchwepheshe
Recipe "inyama namazambane e multivarka" - esiphundu, eqotho, elula
Indlela yokukhipha izinkukhu. Amathiphu ambalwa kubanikazi bezinkukhu
Okuthile "Zentiva" ukulungiselela (vitamin E)
Valentin Istomin: Biography, ukuphila siqu. sasendlini kukaStalin
Indlela ulungiselele proxy: izindlela manual kanye isofthiwe
Abameli eyaziwa kakhulu
Kuphi kuMlawuli Ingxabano inkampani ukuphathwa